Indlu entsha eyakhiwe eco, iikhilomitha ezi-2 kuphela ukusuka e-Inverurie - I-Airbnb
Indlu entsha eyakhiwe eco, iikhilomitha ezi-2 kuphela ukusuka e-Inverurie
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguEwan
Indlu esandula ukwakhiwa, i-eco-friendly, kwifama esebenzayo, enembono entle kakhulu emaphandleni ajikelezileyo. Iseta kwibala layo legadi, ecaleni kweehektare ezi-6 zemithi encanyathiselweyo. Kuzolile kwaye kunoxolo, kodwa ziikhilomitha ezi-2 kuphela ukusuka kwidolophu ekhulayo yase-Inverurie.
Indlu ilala iindwendwe ezi-6 kwaye iyafikeleleka kubasebenzisi bezitulo ezinamavili. Umgangatho ophantsi unesicwangciso esivulekileyo sekhitshi lendawo yokutyela kunye negumbi lokuphumla elineefestile ezininzi ezibonelela ngembono entle kakhulu yelizwe elijikelezileyo. Kumgangatho ophantsi kukho igumbi lokulala elikhulu elinamagumbi amabini kunye negumbi lokuhlambela. Phezulu kukho igumbi lokulala lenkosi, igumbi lokulala elinamawele, igumbi lokuhlambela elineshawa eyahlukileyo kunye nendawo enkulu yokulayisha elungele ukufundwa. Impompo yobushushu yomthombo womoya ibonelela ngobushushu bobushushu obugcweleyo obusembindini, ukufudumeza ngaphantsi kuwo wonke umgangatho ophantsi kunye neeradiyetha phezulu. Isihlomelo esisecaleni kwendlu sinebhola ekhatywayo yetafile kunye nempahla yokuhlamba impahla. Indlu ihlala kwindawo yayo ebanzi evaliweyo enendawo yokupaka iimoto eyaneleyo. Ukudityaniswa nepropathi ziihektare ezi-6 zehlathi labucala elinendawo yokutsha ehamba kuyo kunye neendlela zokuba iindwendwe zethu zizonwabele.
Eli khaya lisuka ekhaya, iikhilomitha ezimbalwa kuphela ukusuka kwiinduli zeBennachie, likwindawo efanelekileyo- libonelela ngokuzola kwicala lelizwe ngelixa likufutshane kakhulu kwidolophu ephithizelayo yase-Inverurie. I-Inveurie ibekwe embindini we-A96 kunye ne-Aberdeen kuphela iikhilomitha ezili-19 ukuya emazantsi kunye ne-Inverness ukuya emantla. Unxweme olusemntla mpuma lubonelela ngeelali ezintle eziselunxwemeni kunye nembonakalo entle. Kubadlali begalufa kukho iplethera yamabala egalufa afikeleleka lula kwaye kwabo banomdla kwimbali, umntla Mpuma uzichaza 'njengelizwe elinqatyisiweyo'.
Umbuki zindwendwe ngu- Ewan
Abanini bahlala kufutshane nokuthenga kwaye bafumaneka uninzi lweentsuku kwaye banokuqhagamshelwa ngetekisi / i-imeyile nangaliphi na ixesha.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pitcaple